In wax xun la dareemo
Visa/dölj undermenyn till In wax xun la dareemo
Qofkastaa marmar ayuu wax xun dareemaa. Waxa laga yaabaa inay wax xun kugu dhaceen ama inaad is weydiinayso sida ay wax noqon doonaan. Waxa jira waxyaalo adigu aad sameyn karto si aad uga roonaato. Waxaad sidoo kale heli kartaa caawimo si aad uga roonaato.
Waxaad sidoo kale wax xun dareemi kartaa adigoo sababta aan garaneyn.
Waxa adiga ku xanuuni kara jidhka maadaama oo aad maskax ahaan wax xun dareemayso
Halkan waxa ku yaala shan waxyaabood oo aad sameyn karto si aad uga adkeysi badnaato, uga faraxsanaato oo aad uga daganaato:
Sidaad dareemayso u sheeg saaxiib ama qof weyn oo aad ku kalsoon tahay. Caadi ahaan waad nafisi oontaa markaas kadib. Waxa sidoo kale wanaagsan inaad u sheegto dareemada qalqalafsan, tusaale ahaan haddii aad leedahay dareen ah in aanad awoodi-kareyn ama in aanad rabin inaad noolaato.